NEO - Rindrambaiko iray, ny vola rehetra
Banky ho serivisy - BaaS
Fandaharana White Label an'ny karatra
Rindrambaiko ho serivisy - SaaS
SEPA: Ny torolàlana farany
NEO Torolàlana ho an'ny mpampiasa otrikaina roa (2FA)
Fotodrafitrasa ho an'i Sina
Firenena manana lisitra mainty
Antontan-taratasy napetraka ho an'ny orinasa
Ireo antontan-taratasy napetraka ho an'ny kaontinao manokana
Tahan'ny fifanakalozam-bola avy any ivelany NEO ATM / POS
Rindrambaiko Iray, VOLA REHETRA REHETRA
Manokatra kaonty ao anatin'ny minitra vitsivitsy aorian'ny telefaoninao ary ataovy lavitra ny volanao
Sokafy ny kaontinao
Karatra, mihaona telefaona
Tantano ny karatra anaty fampiharana, kitiho fotsiny
Antoka amin'ny fametrahana
Vahaolana iray amin'ny fitantanana vola tsotra
Na aiza na aiza misy anao dia ampiasao ny smartphone na fitaovana hafa hanokafana ny kaontinao tsy misy olana amin'ny IBAN eropeana tokana. Ny fangatahanao miaraka amina antontan-taratasy manokana roa dia hozahana ao anatin'ny ora vitsivitsy.
Fitaovana karama ho an'ny mpiasa
Fanarahan-dalàna momba ny fiainana manokana
Sarany mangarahara 100%
Tsy misy fanoloran-tena
Topimaso amin'ny fandaniana amin'ny fotoana tena izy
3D fandoavam-bola amin'ny Internet Security
Fifanarahana finday intuitive
Ataovy ary araho amin'ny alàlan'ny rantsan-tànanao, 24/7 ny fizotranao ara-bola.
Topimaso momba ny tantaran'ny fifanakalozana
Smart fandoavana any ivelany
Solosaina amin'ny banky eo an-toerana
Orinasa tsy misy fetra
Mora ny maha-vahiny
Avadiho ho hetsika tsara ny fifanakalozana rehetra.
Reforest raha miantsena ianao Miara-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny ala reforestation manerana izao tontolo izao. Alefaso ny Plant Your Change ho an'ny fividiananao rehetra ary ampio hofoanana ny dian-tongotrao anao. Isaky ny hazo ambolenao dia hahazo taratasy fanamarinana misy ny fampahalalana lehibe rehetra momba ilay hazo ianao: ny karazan-javamaniry, ny toerana, ny mombamomba ny tetikasa fambolena, ny sanda onitra CO2 ary maro hafa. Tree-Nation dia fonenan'ny tetikasa fambolena 90 avy amin'ny firenena 33 samy hafa.
163 710 hazo ambolena ao Burkina Faso
Hazo 42 336 nambolena teto Madagascar
Hazo 47 485 nambolena tany Kolombia
184 673 hazo nambolena tany Kenya
Jereo ny farany avy amin'ny BancaNEO amin'ny haino aman-jery.
Vola marobe amin'ny fandoavam-bola
Tsy misy kaonty misaraka isaky ny vola vahiny. Mandefasa ary mahazoa vola eran'izao tontolo izao amin'ny vola 38 miaraka amin'ny vola IBAN marobe mifamatotra amin'ny kaonty tokana.
Tolotra manokana ho an'ny Ireo manana karatra NEO
Ampiasao tsotra izao ny karatra NEO ary ankafizo ny fifanarahana, tolotra ary vokatra miavaka.
Mahazoa fidirana amin'ny tolotra sy fifanarahana isan-karazany, anisan'izany ny sakafo sy divay, fiantsenana, fanatanjahan-tena, fialamboly ary maro hafa.
Fitaovana fiarovana azo antoka hitahirizana ny volanao. Manaraka ny fenitra fiarovana avo lenta EMI izahay hitahirizana ny volanao sy ny angon-drakitrao manokana.
Ny vola mpanjifa dia voatahiry ao amin'ny kaonty misaraka amin'ny National Bank of Lithuania
Fiarovana vola mampiasa 3D azo antoka sy 2FA
Rindrambaiko miady amin'ny hosoka sy rafitra
Mangataka kaonty amin'ny minitra
Raiso ny kaontinao NEO anio!
Raiso ny kaontinao NEO
Amin'ny alàlan'ny fanolorana fitaovana avo lenta sy teknolojia avo indrindra ho an'ny mpanjifa an'arivony, manova ny tontolo ara-bola eran'izao tontolo izao izahay, manokatra ny fahafaha-manao ho an'ireo mpampiasa serivisy ara-bola vaovao ary mampiakatra ny haavon'ny fahaizany mamaky teny sy manoratra.
Bankin ho serivisy - BaaS
Software toy ny Service
Toerana: Naituse tn 3, Tartu , 50409, Estonia
Bancaneo miaraka amin'i Satchel dia mpikambana lehibe ao amin'ny MasterCard Europe amin'ny famoahana karatra.
Bancaneo miaraka amin'i Satchel dia miasa eo ambanin'ny Satchelpay UAB (reg Nr. 304628112) izay nahazo alalana avy amin'ny Sampan-draharahan'ny Fanaraha-maso ao amin'ny Banky Foiben'i Lituania ary nahazo alalana amin'ny rafitra elektronika Nr. 28, miaraka amin'ny kaody mpandray anjara amin'ny rafitra fandoavam-bola Nr. 30600, izay manao raharaham-barotra amin'ny lalàn'ny Repoblikan'i Litoania.
Zon'ny mpamorona @ 2021 NEO. Zo rehetra voatokana